Home » Creative Writing » မှတ်မှတ်သားသား စားဖွယ်များ – ရန်ကုန် – မန္တလေး – စစ်ကိုင်း
KZ's Diary KZ's Food မန်းလေး စားညွှန်
၂။ JUNIOR DUCK RESTAURANT
နန်းသီတာ အဆောက်အဦ အပေါ်ထပ်-အောက်ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
၅။ GOLDEN DUCK (Sayarsan) Restaurant
Tel – 0973163366, 73163377, 73163388
ဆိတ်အကြောကို ခါးပတ်ချက်ချက်တာ ဆိုလားး
ဒါက ဒီ တစ်ပုံပဲ ရှာတွေ့တော့တယ်။
လိပ်စာ – မန်းလေး ကန်တော်ကြီး
ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအသောက် – အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း အစားအသောက် မျိုးစုံ၊ အဖျော်ယမကာမျိုးစုံ
အိုင်ဘား က ဟင်းပုံနဲ့ ကုက္ကိုကျွန်းက ဟင်းပုံတွေက တူနေတယ် ၊
ဓာတ်ပုံတွေ ရောပြီး မှားထည့်။
​မြေနီကုန်းရှင်​​စောပု ကားရပ်​နားကွင်းမှာလည်း ဓနုဖြူ​ဒေါ်​စောရီရှိတယ်​… ကျယ်​ဝန်းပြီး… ကားရပ်​ဖို့အဆင်​​ပြေတယ်​… အရသာက​တော့ နျုင်​ငံခြားသားကြိုက်​… ​ပြောရမလားပဲ… ခပ်​​ပေါ့​ပေါ့… ​နေရာ​တော့ ​တော်​​တော်​​လေးသန့်​တယ်​… :-)
လှည်းတန်းက ဒေါ်စောရီတောင် ဟို ၃ ယောက်ခေါ်လို့ ရောက်ဖူးတာ။
.ဘဲကင်တကယ်စားကောင်းတာကတော့ သခင်မြပန်းခြံနားက Western Park ပဲ :sar:
သူက ပီကင်း ဘဲ ကင် ဆိုပြီး ပီကင်း က စတိုင် ထုတ် တာ ..
မှန်တာ ပြောရရင် အဘ က ဘဲကင် မစားဘူးရယ် ။
ဘဲကင်ဆို.. အရိုးနုအထိ.. ကိုက်စားရမှကြိုက်…။
ကျနော် ကိုက်ပြီးသား အရိုးဆို
သများတို့ကတော့ MICT Park နားက တစ်ခါပြင် ၈၀၀ ထမင်းဆိုင်နဲ့
လှိုင်မင်းက ၂၀၀ တန် လဘက်ရည်လောက်ပဲ ကျွမ်းပါတယ်ကွယ် ၊
” ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က ဂန္ဓမာ (Whole Sale) ဟိုးဆေး နားက ခိုင်ခိုင်ကျော် ကို ညွှန်းကြပါတယ် ”
ရန်ကုန်နေတဲ့သူတောင် အဲ့လောက် မသိဘူးရယ်…
သတင်းစာထဲ အရင်ပါပြီးလို့ ပို့(စ) တင်တာပါကွီ။
လင်ခ့်အတိုင်း သွားဖတ်တော့လည်း ….တော်တော်နဲ့ ပေါ်မလာတာနဲ့….
ဒီတခေါက်မန်းလေးရောက်ရင် စကောထမင်းစားဖြစ်အောင်သွားစားရမယ်.. :sar:
စားနေရင်း နာ့ ကို လွမ်းနော်။
ဟင် ဂယ်ရီးလား ကျေးဇူး မွမွ…
SKII ကဒီမာဝယ်ပီးဘီသိလား ပို့နဲ့တော့
Credit to Aung Kyaw Moe
ခုချိန်ထိ စိတ်တိုင်းမကျနိုင်တဲ့ ကောင်းကင်ပြာရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုထင့်….
၁) အညွန့်လေးးတေ အရင်သင်
မန်းလေးသူမို့ မန်းစာပိုကျွမ်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။
ဈေးလည်းတန် စားလို့လည်း ကောင်းတယ်။
FB ပရိုဖိုင်ပုံမှာ ၀ိတ်တက်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်း။
ဒီ​နေ့ည အိမ်​မှာ ဟင်းမ​ကောင်းပါဘူးဆိုမှ ဒီပိုစ့်​နဲ့ တည့်​တည့်​ တိုးရတယ်​လို့ ဟင်းးးး ငါရှင်​ချင်​တယ်​
12 Pana လည်း နေရာထိုင်ခင်းကောင်းတယ်။
ကို ကာကြီး အတွက် ဒကာမ ရှာပေးမယ်။
တောင်ဥက္ကလာ စာတိုက်လမ်းဆုံ ရဲစခန်းနားက Feel က သူများအိမ်နဲ့ ကျောကပ် မျက်စောင်းထိုးရယ်…